Jubbaland oo Ra’iisul Wasaare Rooble ka dalbaday inuu xilalka ka qaado taliyayaasha ciidanka cabsina muujisay.
May 3, 2021 Xuseen 15
Puntlandtimes (KISMAAYO)-Xukuumadda Jubbaland ayaa ka dalbatay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inuu xilalka ka qaado taliyayaasha kala duwan ee ciidanka dowladda Federalka ah ee Soomaaliya.
Wasiiru dowladaha Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Jubbaland Xirsi Jaamac Gani ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha looga baahan yahay in uu adeegsado awoodiisa Dastuuriga ah, isla markaana uu dhamaan xilalka ka qaadao Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka sida.
“ Sida ku cad qodobka 99aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya waxaa ku jira xuquuqda RW iyo laantiisa fulinta inay dalacsiiyaan ama shaqada ka eryaan taliyayaasha ciidamada. Waxaan kula talinayaa Ra’iisul Wasaare Rooble inay tahay inuu adeegsado awoodiisa si uu faa iidada ugu helo mideynta ciidamada ayuu yiri” Ayuu yiri wasiir Gaani.
Dhanka kalena, wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland ayaa shalay sheegay inay weli shaki ka qabaan Saraakiisha Ciidamada, isla markaana ilaa Farmaajo uu si rasmi ah uu ugu wareejiyo amniga dalka Ra’iisul Wasaaraha aysan ka qeyb galeyn shirar looga hadlayo Arrimaha doorashada.
Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Midowga Musharixiinta aayaa marar badan dalbaday in xilalka laga qaado Taliyeyaasha Ciidamada dowladda, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u adeegsaday Arrimo siyaasadeed kuna weeraray Madaxdii hore ee Soomaaliya.
Haddii la doonayo in ciidanka dhufeysyada kaga jira Xamar — ka baxaan isla markaan madaxda Puntland iyo Jubbaland si kalsooni ah ugu soo laabtaan Xamar dhexdiisa waa in la siiba tiirarka Farmaajo u aastay keligitalisnimada oo kala ah: Fahad Yaasiin, Xijaar, Odowaa, Biixi, iyo Kullane-jiis. Waa shan shakhsi oo aan markii horeba meesha ku gaarin karti iyo aqoon laakiin loo keensaday in loo adeegsado dan shakhsiyeed. Badbaadinta dowladnimada Soomaaliyeed ayaa shantaba ka weyn. Ugu yaraan waa in xilka laga qaadaa Fahad Yaasiin iyo odayga hawlgabka ah ee Biixi. Taas ayaa fure u ah in la aamino in Rooble leeyahay awood ka madaxbannaan Farmaajo. Markaas kadib ayaa laga hadli karaa shir, ajende, iyo wadahadal.
Saxid: waa in la siibaa ….
Ethiopia ayuu ku dhashay ninkan
Masiirka somalia katalinayo
Xirsi jamac gaani waan
Garan qalad baad ku jogtaa
Kismaanyo somali ahaan
Waad jogikartaa kilinka
Dorasho halaado ayay howshu
Maraysaa maxaa mesha taliyaal
Keenay waa waxa aan gumaysi
Kilinka ogabixi lanahay
Melaha aan dagnoo dhan
Waa lagumaystaa maba hadli
Karno oo walaahi rooble
Pm hosha uu wado halagu
Cawiyo si aay Somalia u
Istaagto asc all of you
Kkkkkkkk waligay dad fashilmay daadkaan mucaaradka kaliita ma,arag oo isago guduumiye gobal ka ah soomaliya ayuu am rayaa ra,iisul wasaaraha wadanka somalia . Kkkkkk adigu yuusan hubka kaa dhigin , ee maxaa kaloo idin haray aad oran laheydeen kkkkkkkk MALAHA …… FARMAAJO NOO GEEYA AYAA IDIN DHIMAN.
MARKII HORE WAXAA IDIN HAYSTAY “LABO DARAN MID DOORTA ” EE HADA WAXAA IDINHAYSTA ” MID DARAN DOORTA ” KKKKKKK KKKĶKKK KKKKKKK SIYAASIYIIN TII CAANO NUUGYADA MAXAA KALE OO IDIN HAREY ??????????
MONICA JUMA warkeeruu u egyahay warkaan!
Qolyaha leh Madoobe waxa uu ku dhashay Itoobiya, waxa aan u malaynahayaa waxbaa isaga khaldan. Sida aan taariikhda kuhayo, Madoobe waxa uu ku dhashay degmada CADAADO. Haddaadse ka waddaan waa nin Ogaadeen ah, goorta reerkaa Soomaalinimada laga saaraan la yaabanahay.
Sida aan ku aqaan, Ogaadeenku waa reer ballaaran oo deegaan ballaaranna dega. Awoodda ugu weyn ee Soomaalida degta kililka waa iyaga; awoodda ugu weyn ee degta NFD waa iyaga, jamhuuriyadda Soomaaliyana deegaan ballaaran bay ku leeyihiin. Dhinaca kale, Siyaad Barre waxa uu ku dhashay (sida la xaqiijiyo) Ceel-gaabta oo ka tirsan Shilaabo iyo Wardheer, madaxweynuuna ka ahaa jamhuuriyadda. Marka, yaynaan jamhuuriyadda kala xigsan, iyada uusan dastuurkeennu kala xigsan.
Gunaanadkii, Amxed Islaam cidna jamhuuriyadda kama xigto, laakiin wuu ku khasbanyahay in uu maamulkiisu ku hadaaqo waxa Nayroobi looga soo yeeriyo, waayo iyaga ayaa caleema saartay sida la wada ogaaba. Taana eeddeeda isaga dusha looma wada saari karo sida aan aamminsanahay. Eedda ugu weyn waxaa iska lahaa dawladdii markaa jirtay ee u oggolaatay in Kenya ama waddamada SAFKA HORE ay AMISOM ka mid noqdaan. Khaladkii dawladdaasi samaysayna waata maanta aynu la dhutinayno dhaawacyadii ay noo gaysatay.
Si kastaba, Amxed & Deniba way ku khasabanyihiin in ay shirka bilaa shuruud ku tagaan. Luuq luuq waa dhammaaday meel waxaa la isla soo gaaray aan lahayn geed lagu gabado.
ROOBLE gacanta waxba kuma hayo. MUQDISHU waxaa u harayaa ninkii xoog leh. Baryo waa ka tagtay.. Is-aaminid meesha waa ka baxday.
Waxaa iga tallo ah, MAREEXAAANNOOOOOOOW is-daba qabta.. Dagaal ka dhaca ku guulaysan meesaan, ee wiilkaan meesha ka qabta oo BUFALLO ku celiya ama xaaskiisa ha ka dabo tago iyo Ugandha.
Hadii MUQDISHU dagaal ka dhaco, MAREEXAANOOOW ogsoonaada, beeraha JUBBALAND baa idin ku falidoonaa… sidee debbi caato ah. Shaabuug baa idin la dhicidoonaa.
Hadii kale, hadda aad sharaf leediheen, war jooga, oo talada qaata, oo SOOMAALIWEYN raali gelin siiyaa..
Hadii aad diidaan, waxaad ka hishaan, waxba DAAROOD ha ka siininaa.
@@@@ BARAWAANI KING/WIIL QARDHO!
Waxaan ku Su’aalay, Fatmaajo ma MAREEXAAN ayaa inta iska soo dhex doortay SOOMAALI u keenay oo yiri, ninkan u doorta Madaxweynaha SOOMAALIYA?! Bal Caano hele arrintan aad soo celceliso raad raac u yeel oo Su’aashan iiga jawaab?!
Middan aad had iyo goor MAREEXAAN u dardaar werineeysa ee aad haddeer leedahay Beeraha JUBOOYINKA ayaa la idinku falan doonaa haddii aaydaan Farmaajo meesha ka leexin hal arrin baan kaa leeyahay!
91kii markii aay SIYAAD BARRE Hawiye XAMAR Xabbada ku billaabeen, wax garadkii MAJEERTEEN ee XAMAR joogayna wayn isu hambalyeeynayeen, Dummarkii MAJEERTEENA mashxarad bay ku dhufeen, SALAADIINTII joogay Gobolka Barina waxaay noqdeen, Dadkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqay in aay ka hoosbexeen, Taliskii AFWEYNE!
Maxaa xigay hee?! Kkk
Beelihii DAAROOD ee uu ku dhacay, dhibkii ugu weynaa iyo Xasuuqii beelaha IRIR?!
War ninyahow, Qabiilkan MAREEXAAN ducadii Awoowe Daarood ayuu qabaay waxba ha u dardaar werine, adigu yaaysan sidoodii ku Xasuuqin IRIRKAN aad sidaadii Futada BASBAASKA ka marisay! Kkk
Ogaadeen iyo Majeerteen tooda ayaa soconasa, Wuxuu Ismaqiiqe farmaajo is adkeeyo oo iska dhigo nin uusan aheyn maanta waa curyaan awood aan laheyn, Quule iyo wixii xumaa uu caadada u lahaayeen ayaa sugaya. Puntland iyo Jubbaland oo diidey xukun kiisa, waxey tuseen walaalhood XAMAR in Daanyeerku uusan wanaag wax ku laheyn, waajibna ay tahey la iska cesho, lana eryo. Kablalax waxey u arkaan Gaf iyo meel ka dhac in Mareexaan uu xumo, ayna u suubsaneyn garan karin ama laheyn axa looga baahanyahey inuu leeyahey leader/ hogaamiye.
Sida aad magacaagu u qarisay ayuu Ilaahna kuu qariyey, oo waxaad tahay qof aanan isku kalsooneyn!
Mareexaan xukun xiiso uma hayo oo 21 sano ayaay u gaardinayeen Aabbeyaashaa iyo reerkiina!
Mareexaan, Majeerteen iyo Ogaadeena waa Ilmo wada dhashay. Laagaab xitaa Magaciisa qariyeyna ka weyn dad uu isku diro oo uu ka dhex Kalluumeysto!
X X XADE
Waad edeb daran Xade Xaare. Hal dhuusa weyne ayaad tahey oo meesha show of iyo ha lagaa sheego la yimaada. Sida muuqata kuwii dadka Somaliyeed xasuuq ayaad ka mid tahey.! Yibir yibir dhaley iyo inaan kiis. buraanbur iyo heeshii Afweyne ayaad meesha ka timaafa. ILAAHEY iyo xaaraanta aad u hiilaso QARI.
DAD FASHILMAY WAXAY KA KALUUMEYSTAN QABIIL IYO QURUN EE URUURKA LA MAGAC BAXAY ( NA BADBAADIYA) KKKK WAA DAD DAAD QAADAY XUMBO CUSKAY , KKKKKKK MISE WAXAAD WADAAN DADKA HINAASKA FARMAAJO , SHINIYEY XAGEE KUU NUGUL WAXAY TIRI GOLANKA . kkkkk mucaaradka farmaajo ayay kalal madaan waxay indho dadbayaan Rooble . Kkkkkk allow cabsidaa na geli .
BAL MAXAAD KA RABTAN MAREEXAN MISE WAXEEY NOQDEEN WADKII MAXAMUUD SALABEEN XUKUN JECEL KKK . ABSAME DHISTA JUBADA HOOSE IYO DHEXE KA TANASUL GEDO, MAXAMUUD SALABEEN XUKUN JECEL KU EKOW BARRI, NUGAAL IYO WAQOOYIGA MUDUG KACDOON BADAN WUU SOO SOCDAA WAAYO MAXAMUUD SALABEEN XUKUN JECEL 22SANO WAXBA MEYSAN QABAN ANAN AHEYN BOOB IYO BURCAD SIYASADED
Horta maantay DAAROOD ha u baqin. Maantay DAAROOD 4 dawladood buu leeyiheen:
3. DDS ee ETHIOPIA
4. NFD ee KENYA.
Maantay Abtiyaasheey, waa cududa Geeska Afrika, hadda waa markii xoogii ETHIOPIA uu burburay.
Ha qaldamin, DAAROOD ma ahaa sidee 1991. Waxaan qabaa, hadii JUBBALAND iyo PUNTLAND ay taageri lahayd FARMAAJO, in aan nina is-hortaageen. FARMAAJO wuxuu noqday XAAR socda, oo aan la qaadan karin. Wuxuu lumiyey karaamadii iyo sharaftii iyo kalsoonidii, iyo qabkii DAAROOD.
FARMAAJO wuxuu lacaqli noqday, DUBBI, MAMO KHADIIJO, LAGA-ROONI JEESOOW, SANQAAFUUR DALXA.
FARMAAJO ma noqon nin leh dhaqankii, diintii, karaamadii DAAROOD WEYNI, ALAAAH WEYNI.
Hase ahaatee, PUNTLAND iyo JUBBALAND xaq-darro kuma taageeri karaan XAAR FARMAAJO.
Waxaan had iyo habeen ugu dardaaweriyaa MAREEXAAN waxaa weeeye in MAREEXAAN uusan lahayn deegaan wax soo saar leh, in MAREEXAAN uu leeyahay dhaqaali mid xoolo, mid bad iyo mid ganacse iyo mid beero ah.
Waxaa igu maqaalo ah, xoogaa ka soo gala KASTAMKA BUULO XAAWO wax kale oo dhaqaali ah ma laha.
Hadii dagaal dhaco, oo ay MUQDISHU gubato, wax ka khuseeyaa JUBBALAND iyo PUNTLAND ma jirto. PUNTLAND iyo JUBBALAND waa dawlado dhisan oo leh, dhaqaalahooda, xoogooda iyo amini suggan.
MAREEXAAN iyo DHULBAHANTEE waa idinka tuman MUQDISHU…. Hadii la idin soo baacsado, oo YEEYDA HAWIYE idin soo baacsato, maxaad qaban doontaan.
Shaqo iyo jago madaxnimo 30 sanno oo soo socda, xaaraam beey idin ka tahay…….
Marka, ha eegan maantay waxa ku horyaal, waxaano ka degaynaa waxaa soo socda…
XAAR FARMAAJO waddanka ka qabta.. idinkuna ku nabad gala, oo sharafta DAAROOD iyo tii MAREXAAAN ilaaliyaa.
ABTIYAAL hadii aad diidaan, idinka lee idin khuseeysaa..
Waxaa meesha soo galay, tii ku dhacday NEBI YUUSUF…ee ahayd nacas la dilaayo intuu u hiilyey, hadana sheegay….
Tii baa i haaysata caaway… Maxeey ahayd aayado:
(فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ)
Bal SOOMAALIWEYNEEEY, nacaskaas aan u hiiliyey, bal eega meesha uu geeyey…
TUFKUBAX …. HADII LA YAABO, YAASIINKA, YAASIINKA